Somali - Tirol impft | Land Tirol
Somali - Tirol impft
Tyrol waa la tallaalay.
Wadada dib loogu noqdo sida caadiga ah.
Tirol way Talaaleysaa. Is diiwaan galin la aan.
Macluumaadka guud ee coronavirus
Maxaa laygu tallaalayaa?
Ujeeddada la sheegay ayaa ah in la gaaro heerka ugu sarreeya ee suurtogalka ah ee tallaalka ee kooxaha dadka tallaalka loogu talinayo. Markay sare u kacdo caymiska tallaalku, ayay u badan tahay inaynu ka fogaan karno noocyada daran ee cudurka iyo dhimashada Sidaa darteed qof kasta oo la tallaala wuu tirsanyahay. Ma jiri doonto waajibaad guud oo ah in la tallaalo. Taa baddalkeeda, dowladdu waxay ku tiirsan tahay dadka u shaqeeya si iskood ah iyo in ay gaaraan go'aan xog-ogaal ah. Qof kasta oo doonaya in la tallaalo ayaa la awoodaa in la tallaalo iyada oo ku xidhan kooxda tallaalka ee lagu qeexay waqtigaas (iyadoo lagu saleynayo mudnaanta iyo helitaanka tallaallada). (Xigasho: Wasaaradda Arimaha Bulshada ee Austria)
Talaalka COVID-19 ma lacag la’aan baa Tyrol?
Tallaalka COVID-19 ayaa lagu heli doonaa lacag la’aan dhammaan dadka ku nool Tirol ee doonaya in la tallaalo.
Yaa qaadan kara talaalka ka Hortaga cudurka Covid-19ee gobolka Tirol ?
Guud ahaan waxa tallaalka ka-Hortaga qaadan kara dadkada’doodu ka wayn tahay 12 Jir ee dagan gobolka Tirol ama si joogtoah ugadhex shaqeeya. Hadii qofku laheyn lambar cafimaad oo Austria ah, waa inuu la socodsiiyaa dawlada markuu balanta talaalkaqabsanayo.waa inuu ku sii xaqiijiya goobta talaalka markuu joogo, inuu Tirol daganyahay (tusaale ahaan: cadaynta adreeska, ama warqad shaqada ka socoto).
Xagee baan isku talaali kara gobolka Tirol?
Waxaa talaalada lagu fulin doona qeebaha iyo xarumaha kala duwan ee shacabka loo talagalay, waxaa kale oo sii fulinayaa dhakhaatirda lpp aqoonsanyahay sida dhakhtarka faamiliga.
Yaan la talaalin doonin?
Mabda 'ahaan, kaliya dadka caafimaadka qaba ayaa la tallaalayaa. Haddii qof muujiyo astaamaha COVID-19, lama tallaali karo.
Caruurta iyo dhalinyarada kayar 12 sano, oo aan hada talaalka ruqsad loo siinin, waa inaan la talaalin. Maaddaama aan weli la helin caddayn ku filan, haweenka uurka leh ama naas nuujinaya waa in hadda la tallaalaa oo keliya ka dib qiimeyn-shaqsi qiimayn. Qof kasta oo la ildaran cudur ba'an oo leh qandho ka sarreysa 38.5°C waa inaan la tallaalin illaa ay ka bogsadaan. Si kastaba ha noqotee, qabow ama heerkul yar oo sarreeya (ka hooseeya 38.5°C) maaha sabab dib loogu dhigo tallaalka. Waa inaan lagaa tallaalin haddii aad xasaasiyad u leedahay qayb kasta oo ka mid ah tallaalka. Fadlan ogeysii tallaalka kahor tallaalka haddii aad xasaasiyad leedahay. Dadka horey loo soo arkay inay qabaan cudurka cusub ee coronavirus isla markaana caafimaad ahaan caafimaad qaba uma baahna in marka hore la tallaalo, laakiin ma jiraan wax laga sheegayo tallaalka. Tijaabooyinka antibody, baaritaanka antigen, ama baaritaanka PCR looma baahna tallaalka ka hor. (Xigasho: Wasaaradda Arimaha Bulshada ee Austria)
Imisajeer ayaynu is talaali karnaa, si aynuDifaac adag u helno?
Tirol hada waxa laga helaa tallalada la dhaho BioNTech/Pfizer (waa talaal laba jeer la qaadanayo, inta udhaxaysa 21 maalmood), Moderna iyo AstraZeneca (waa tallaal laba jeer la qaadanayo, inta udhaxaysa 28 maalmood) iyo waliba tallaalka Johnson & Johnson. Tallaalkani Johnson & Johnson waxaa la qaataa hal mar oo kaliya. Meeshan waxaad ka heli kartaan faafahin caafimaad oo dheeraad ah.
Halkan u guji xaashida macluumaadka caafimaadka.
Maan kala dooran kara, nooca daawada laygu talaali doono?
Talaalada aan balan qabsashda ubaahnayn iyo waliba sido kale kuwa balanta u baahan oo layska diiwaan galinayo pagka www.tirolimpft.at ,waxaa qof kaste u furan, inuu kala doorto daawada lagu talaali doono. Marku qofku da’diisa sii sheego, waxaa u soobaxaya page laga dooran karo nooca daawada da’diisa ugu wanaagsan ee ugu haboon. Talaalada oo la isticmaalo waa: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca iyo waliba Johnson & Johnson.
Awood miyaan u leeyahay inaan dib u dhigto balanteyda ama aan kansalo?
Haa, balan hadaad hore u laheed oo rabtid inaad kansasho, waxaad gali kartaa pagkaaga khaaska ah ee laguu furay kadibna waad kansali kartaa. Hadddi aad u baahnaatid mustaqbalka inaad dib isku diwaan galisid, waxaa kugu waajib ah inaad bilow hadana soo booxisid warqada isquruda.
Maxaan ku cadayn karaa inaan talaalka-Covid qaadtay?
Fadlan haddi aad awoodid balantaada waxaad hore usoo qaadata Passporkaga talaalka jaalaha ah/huruuda ah- haddi aadan haysanin, waxaad kasii dalban kartaa dhakhtarkaaga kuu qaaska ah (Hausarzt) waxaa sido kale passporka lagu bixin doona isla goobta talaalka. Goobta talaalka waxaad ka heli doontaan kaadhka aqoonsi talaalka, kaasoo lagu qori doono talaalada aad qadatay, kadibna waxaa Informationka kaadhka ku yaala loo wareejin doona passporka talaalka ee huruuda ah. Tallaalkaaga ayaa sidoo kale lagu qori doonaa kaarka tallaalka elektaroonigga ah (e-Impfpass). Waxay qaadan kartaa talaabadani ilaa mudo laba toddobaad in kaarka tallaalka elektaroonigga ah la geliyo. Mid kasta oo ka mid ah saddexda ikhtiyaar ee kor ku xusnay ( passborka talaalka, karaka elektarooniga ah ee talaalka ama karaka yar) ayaana loo isticmaali doona in lagu galo goobaha kala duwan ee dadku ku kulman sida maqaayadaha, xafladaha, iyo waliba goobaha ciyaaraha...
Waa maxay waqtiyada loo tala galay tallaallada?
Qiyaasta wax tarka ay leedahay talaalada (labada qaybood leh) ay ansaxisay hay’da daawooyinka yurub EMA, ayaa lagu qiyaasa ilaa 360 maalmood laga bilaabo maalinta talaalka qaybtiisa labaad qaadatay. Talaalada oo hal mar uun la qaadanayo sida (Johnson & Johnson) wuxu wax tarkiiso bilaabmi doona 22. Maalinti lagu taalaalay ilaa iyo 270 maalmood.
Dadka hore cudurka Covid ku dhacay oo ka bogsaday, waxay kaliya ubaahanyehiin hal qayb talaalka iney qaadtan. Waxuuna wax tarkiiso bilaabaya isla maalinta lagu talaaloyo. (xigasho: www.gesundheit.gv.at)
Hadda waxaan qabaa COVID-19. Ma lay tallaali karaa?
Haddii ay dhacdo infekshanka Sars-CoV2/baaritaanka Sars-CoV2 ee saxda ah, waa lagugu tallaali karaa marka ay dhammaato muddada iskarantiilka ee tobanka maalmood ah, ama mar haddii aad si buuxda u bogsato. (Xigasho: Wasaaradda Arimaha Bulshada ee Austria)
Hadii uu mar igu dhacay cudurka Covid19, ma iska tallaali karaa?
Dadka lagu xaqiijeyey PCR Test inuu cudurka Covid hore ugu dhacay, ama dadka xaqiijiya in difaaca jirkoodu (Antikörper) horeba u laha cudurka SARS-CoV-2, dadkaasi waxey u baahanyehiin oo kaliya in hal marla tallaalo. Tani waxey xoojineysaa difaaca jidhka. Maadaamo hore cudurka Covid19 kugu dhacay, jirkaagu difaac ka Hortag ah ayuuba sii dhistay, hadana talooyinka ay soo jeedisay hay’ada talaalada wadanka waxey tahay inay hal mar la tallaalo dadka noocaasi ah. Markey saa tahay, talaalada laba balamood loo baahanyahay adiga hal balan ayaa lagu siinaya! Waxaa tallaalada guud la qaadan karaa laga bilaabo 4 todobaad kadib markii cudurka lagaa helay ee aad positive noqotay ama aad sifiicanuga bogsatay cudurka.
Fadlan, waxaad gashaa pagekanwww.tirolimpft.at meesha ay ku taalo “Erstimpfung” si aad u heshidtalaalka halka mar ah
Waxaan qabaa hargab ama infekshan kale. Miyaa lay tallaalayaa?
Dadka si ba'an ugu jiran jiran infekshinka qandhada waa inay sugaan illaa ay ka bogsadaan in la tallaalo, haddii kale wax saameyn ah oo tallaal ah ama saameyn aad u yar ayaa dhici karta.
Anigoo ah xasaasiyad qaba, ma heli karaa tallaalka COVID-19?
Dadka qaba xasaasiyadda la yaqaan iyo kuwa caadiga ah – sida xasaasiyadda manka ama boodhka guriga –waa la tallaali karaa waana in la tallaalo. Xaaladaha xasaasiyadaha kale, tan waa in horay loogala hadlaa takhtarka daaweynta bukaanka. Si kastaba xaalku ha ahaadee, kaarka xasaasiyadda waa in lala yimaadaa tallaalka. Xasaasiyad kasta ma mamnuucayo qofka inuu qaato tallaalka COVID-19. Macluumaadka ku saabsan alerjiyeyaasha suurtogalka ah waxay ku jiraan macluumaadka farsamada (ka kooban) tallaalka u dhigma. Marka la tallaalayo dadka xasaasiyadda qaba, waqtiga fiirsashada ee ku xigta waa in la kordhiyaa illaa 30 daqiiqo xaalad kasta ha noqotee. (Xigasho: Wasaaradda Arimaha Bulshada ee Austria)
Tallaalka COVID-19 ma keeni karaa falcelin tallaal, dhibaatooyin ama guud ahaan waxyeellooyin?
(Qoraallo ku saabsan falcelinta tallaalka, dhibaatooyinka tallaalka iyo dhibaatooyinka soo raaca).
Macluumaadka Wasaaradda Arimaha Bulshada: Waa in lagu kala soocaa halka udhaxeysa falcelinta tallaalka iyo waxyeelada dhabta ah.
Dareen-celintu waa ifafaalooyin la socon kara saameynta dhabta ah ee tallaalka waana muujinta fal-celinta jirka ee (la doonayo). Khatar ma ahan, laakiin waxay noqon karaan wax aan fiicnayn oo badiyaa waxay ku dhacaan goobta tallaalka qaab casaan ah, laga yaabee inay bararto, iyo sidoo kale xanuunka heerar kala duwan. Dareen-celinta tallaalka nidaamka sidoo kale waa suurtagal waxaana ka mid ah dareemo kala duwan sida daal, madax xanuun, qandho heer-hoose ah, dareenka guud "sida hargabka oo kale", iyo kuwa kale. Tallaalada RNA waxaa lagu yaqaan inay aad ugu fiican yihiin firfircoonida habka difaaca jirka, sidaa darteed waxaa loogu yeeraa "reactogenic" in ka badan tallaallada kale. Macnaha guud ee jawaab celinta difaaca jirka, jirku wuxuu soo saaraa walxo badan oo farriin dirayaal ah, qaar ka mid ah walxahaan fariimaha ahna waxay sidoo kale horseedi karaan astaamaha la socda ee aan kor ku soo xusnay. Calaamadahaan suurtagalka ah ma ahan kuwo lama filaan ah mana ahan waxyeellooyin khatar ah oo ay keeni karaan. Waxay calaamad u yihiin soo-gaadhista jirka ee caadiga ah ee tallaalka, taas oo u horseedda waxyeello ka hortag ah. Dareen-celinta tallaalkan waxay sida caadiga ah baaba'aan dhawr maalmood gudahood iyagoon wax cawaaqib ah lahayn waana kuwo aan waxyeello lahayn marka loo eego astaamaha suurtagalka ah iyo waxyeelada ka dhalan karta infekshanka, ee looga hortegi karo tallaalka. Tallaallada waxaa la oggol yahay oo keliya haddii waxtarka tallaalku uu si cad uga miisaan weyn yahay halista tallaalka ee suurtagalka ah.
Dhibaatooyinka dhabta ah ee la filayo ayaa lagu diiwaangeliyaa inta lagu jiro daraasadaha diiwaangelinta, taas oo tallaalka lagu tijaabinayo ugu yaraan 10,000 qof. Waa macquul in waxyeelo aad u dhif ah (aad dhif u ah macnaheedu tahay in ka yar 1 kiis 10,000 qof ee la tallaalay) la diiwaangeliyo oo keliya marka tallaallada la oggolaado Sidaa darteed, xitaa oggolaanshaha suuqa kadib, kormeer taxaddar leh oo joogto ah ayaa loo sameeyaa si loo ogaado waxyeelooyinka suurtagalka ah iyo sii socoshada qiimeynta dheeraadka ah ee saamiga faa'iidada-halista. Dhibaatooyinkaas soo raaca ah ayaa si faahfaahsan loogu taxay macluumaadka khabiirka iyo tilmaamaha isticmaalka tallaalka.
Marka laga hadlayo dhibaatooyinka soo raaca, waxaa muhiim ah in laga feejignaado in calaamado kasta oo cudur oo ku dhaca tallaalka aan loo aaneyn karin tallaalka. Gaar ahaan marka talaalada la siinayo dad aad u tiro badan, itimaalku wuu sii kordhayaa cabashooyinka waxay dhacaan tallaalka ka dib, hase yeeshe, uusan sababin tallaalku laakiin sababo kale ayaa sidoo kale si joogto ah ugu dhaca dadka aan weli la tallaalin, tusaale ahaan mid kale cudur ku dhaca isla waqtigaas ama wax yar ka dib ("dhacdooyinka soo noqnoqda"). Qiimaynta ugu saxsan ee dhammaan falcelinta tallaalka ka dib iyo dhacdooyinka xun, shakhsiyaadka la tallaalay iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee tallaalaba waxaa si xoog leh loogu dhiirrigelinayaa inay soo sheegaan astaamaha oo dhan.
Talaalka Tirol - Hada baa lasii fudadeeyey